Fa maninona ny iPhone no miteny hoe tsy misy karatra SIM? Ity ny The Real Fix! - Iphone
mpandahateny iphone 5c tsy mandeha
ny fomba hanafenana ny nomeraon-telefaonako amin'ny iphone
ipad air 2 tsy hifandray amin'ny wifi
fahasamihafana eo amin'ny falcon sy ny hena
iphone 7 niraikitra teo amin'ny efijery logo an'ny paoma
Mamiratra ny masoandro, mitabataba ny vorona, ary milamina tsara izao tontolo izao, mandra-pahamarihanao izany 'No SIM' dia nanolo ny anaran'ny mpitateranao finday eo amin'ny zoro havia ambony amin'ny fisehoan'ny iPhone anao. Tsy nesorinao tao amin'ny iPhone ny karatra SIM, ary ianao izao tsy afaka manao antso an-tariby, mandefa na mandray hafatra an-tsoratra, na mampiasa angona finday.
Raha manontany tena ianao hoe: 'Fa maninona ny iPhone no miteny hoe tsy misy karatra SIM?', Na raha tsy fantatrao ny atao hoe karatra SIM dia tonga amin'ny toerana mety ianao. Ity olana ity amin'ny ankapobeny dia somary mora ny mamantatra, ary Handeha hamakivaky ny dingana tsindraindray ianao mba hahafahanao manamboatra ny lesoka 'No SIM'.
Inona ny karatra SIM ary inona no ataony?
Raha mbola tsy naheno karatra SIM ianao dia tsy irery ianao: Raha ny tokony ho izy dia tsy tokony hanahy momba izany mihitsy ianao. Rehefa sendra olana amin'ny karatra SIM ianao, ny fahalalana kely momba ny ataon'ny karatra SIM an'ny iPhone dia hanampy anao hahatakatra ny fizotran'ny fitiliana sy ny fanitsiana ny lesoka 'Tsy misy SIM'.
Raha te-hiteny mafy ireo namanao teknolojia amin'ny zava-poana amin'ny finday ianao, SIM dia midika hoe 'Module Identity Subscriber'. Ny karatra SIM-n'ny iPhoneo dia mitahiry angon-drakitra bitika manavaka anao amin'ireo mpampiasa iPhone hafa rehetra amin'ny tambajotra finday, ary misy ny lakilen'ny alalana ahafahan'ny iPhone miditra amin'ny feo, ny lahatsoratra ary ny serivisy data izay andoavanao vola amin'ny sela. faktiora amin'ny telefaona. Ny karatra SIM dia ampahany amin'ny iPhone mitahiry ny nomeraon-telefaonanao ary mamela anao hiditra amin'ny tamba-jotra finday.
Zava-dehibe ny manamarika fa niova ny andraikitry ny karatra SIM nandritra ny taona maro, ary telefaona taloha be kokoa no nampiasa karatra SIM hitehirizana ny lisitry ny fifandraisana. Hafa ny iPhone satria mitahiry ny fifandraisanao amin'ny iCloud, ny mpizara mailaka anao, na ao amin'ny fahatsiarovanao ao anaty iPhone, fa tsy ao anaty karatra SIM anao velively.
Ny fivoarana miavaka hafa amin'ny karatra SIM dia tonga tamin'ny fampidirana 4G LTE. Talohan'ny iPhone 5, ireo mpitatitra toa an'i Verizon sy Sprint izay mampiasa ny teknolojia CDMA dia nampiasa ny iPhone mihitsy mba hampifandray ny nomeraon-telefaona olona iray amin'ny tamba-jotra data, fa tsy karatra SIM misaraka izay hapetraka ao anatiny. Amin'izao fotoana izao, ny tamba-jotra rehetra dia mampiasa karatra SIM hitehirizana ny nomeraon-telefaona ho an'ny mpanjifany.
Fa maninona no mila karatra SIM ihany isika? Inona ny tombony?
Ny karatra SIM dia manamora ny fandefasana ny nomeraon-telefaoninao amin'ny telefaona iray mankany amin'ny iray hafa, ary mirona mafy izy ireo. Noraisiko ny karatra SIM tamin'ireo iPhones maro izay nendasina noho ny fahasimban'ny rano, nametraka ny karatra SIM tao amin'ny iPhone mpisolo toerana, ary nampihetsika ny iPhone vaovao tsy nisy olana.
Ny karatra SIM koa dia manamora ny fanovanao mpitatitra rehefa mandeha ianao, raha toa ka 'voahidy' ny iPhone. Raha mandeha any Eropa ianao, ohatra, dia azonao atao ny misoroka ny saram-piaramanidina iraisam-pirenena tafahoatra amin'ny alàlan'ny fisoratana anarana vetivety amin'ny mpitatitra eo an-toerana (mahazatra any Eropa) ary apetraho ao amin'ny iPhone ny karatra SIM-nao. Avereno ao amin'ny iPhone ny karanao SIM tany am-boalohany rehefa miverina any amin'ny fanjakana ianao, ary tsara ny mandeha.
Aiza ny karatra SIM amin'ny iPhone-ko ary ahoana no ahafahako manala azy?
Ny iPhones rehetra dia mampiasa tray kely antsoina hoe tray SIM mba hitazomana tsara ny karatra SIM anao. Mba hidirana amin'ny karatra SIM anao, ny dingana voalohany dia ny famoahana ny fitoeran-tsolika SIM amin'ny alàlan'ny fampidirana clip taratasy ao anaty loaka kely ao anaty fitoeram-bokatra SIM eo ivelan'ny iPhone-nao. Apple dia manana pejy tsara izay mampiseho ny toerana tena misy ny fantsom-SIM amin'ny maodely iPhone rehetra , ary ho mora ho anao ny mijery haingana ao amin'ny tranonkalany hahitana ny toerana misy azy avy eo ary hiverina eto. Hanomboka hamantatra sy hanamboatra ny lesoka 'Tsy SIM' ho tsara izahay.
Raha tsy te hampiasa taratasy paperclip ianao…
Raha tsy mahazo aina ianao amin'ny fametahana taratasy paperclip ao anaty iPhone dia azonao atao ny mandray a kit ny adaptatera karatra SIM mora ampiasaina avy amin'ny Amazon.com izay misy fitaovana ejector karatra matihanina sy adapter iray ahafahanao mampiasa ny karatra SIM nano avy amin'ny iPhone 5 na 6 amin'ny iPhones maodely na finday hafa. Raha simba ny iPhone-nao dia azonao atao ny mampiasa an'ity kitapo ity hialana amin'ny karatra SIM ary apetaho ao amin'ny iPhone taloha (na telefaona finday hafa izay maka karatra SIM), ary manao antso an-tariby miaraka amin'ny nomeraon-telefaonanao avy hatrany.
Ahoana no fomba hanamboarako ny lesoka 'Tsy SIM' an'ny iPhone?
Apple dia namorona a pejy fanohanana izay mamaha ity olana ity, saingy tsy voatery hitovy hevitra amin'ny filaharan'ny dingam-pitsaharana azy ireo aho ary tsy misy fanazavana momba ny antony ao ambadiky ny tolo-kevitr'izy ireo. Raha efa namaky ny lahatsoratr'izy ireo na ny hafa ianao ary mbola miaina ny olana 'Tsy misy SIM' amin'ny iPhoneo, antenaiko fa ity lahatsoratra ity dia hanome anao fanazavana mafy momba ny olana sy ny fahalalana ilainao hanamboarana azy.
Mety ho hita miharihary izany, fa manampy kosa ny famerenana ny olana eto: Ny iPhone-nao dia miteny hoe 'No SIM' satria tsy hita intsony ny karatra SIM natsofoka tao anaty fitoeram-bidy SIM, na dia tena eo aza ilay izy.
Toy ny olana maro amin'ny iPhone, ny lesoka 'No SIM' dia mety ho olana amin'ny hardware na olana amin'ny rindrambaiko. Amin'ny pejy manaraka , hanomboka amin'ny famahana ireo olana mety hitranga amin'ny hardware izahay satria mazàna mora hita izy ireo amin'ny fizahana sary. Raha tsy manamboatra azy io dia hitety ireo dingana famahana olana amin'ny rindrambaiko izay hanampy anao aho hamaritana ary hamaha ny olanao .